ध्यान, उच्च विद्यालय गणित प्रेमीहरू। हाई स्कूल गणित हिरोर्स, तपाईं पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ विद्यालयमा तपाईंको अर्को ठूलो गणित परीक्षणको लागि अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ र कार्यक्षेत्रहरू र पाठ्यपुस्तकसँग अवधारणाहरू नाख्न लाग्न सक्दैनन्, वा तपाईं होमस्केप वा भर्चुअल विद्यार्थी थोडा थप गणित मद्दत खोज्दै हुनुहुन्छ, तपाईं पर्याप्त प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यी पाँच वेबसाइटहरूको एक बिट बाहिर। तिनीहरू वास्तवमा तपाईंको ज्यामिति, बीजगणना, त्रिकोणमिति र क्यालकुल कुञ्जीहरू समकक्षहरूमा पुश गर्न मद्दत गर्न सक्छन्। एकले तपाईंलाई गणित-सम्बन्धी अनुसन्धान परियोजना र विज्ञान निष्पक्ष विचारहरू प्रदान गर्दछ!
मूल गणित कौशल व्याख्या संग, यो केहि वेबसाइटहरु लाई पहेलियाँ, खेलहरु, र हेरफेरहरु को पेशकश गर्न को लागि उन कठिन अवधारणाहरु को स्पष्ट गर्न को लागि, जो हरेक प्रकार को शिक्षा को लागि एकदम सही छ। डुङ्गा गर्न तयार हुनुहुन्छ? यी वेबसाइटहरूमा एक झिकेर लिनुहोस् कि तिनीहरूका गणितीय अवधारणाहरू लाई अस्पष्ट बाट कंक्रीटमा लिनको लागि डिजाइन गरियो।
तपाईं यी ठिक, मा-घर विज्ञान प्रयोगहरू पनि प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ!
गणित खेलहरू पहिला यहाँ उबाऊ लगाउँछन्, तर जब तपाई साँच्चिकै खेल्नुहुन्छ भने, उनीहरूले आफ्नो कुशलतालाई परीक्षण गर्दछन् जसले तपाईंलाई चाँडै कम्प्युटर बन्द गर्दैन। मलाई विश्वास नगर्ने? "बैंगनी मुसीबत" भौतिकी खेलमा जानुहोस् र स्तर 10 सम्म पाउँदा यसलाई खेल्न रोक्न प्रयास गर्नुहोस्। असंभव। तपाईं प्रयास गर्न चाहानुहुन्छ। यी गणित क्विज-बिल्डरहरूले तपाईंको गणित कौशललाई धेरै ठोस तरिकामा परीक्षण गर्छन्। हरियाली ब्लकहरू तपाईंको भौतिक विज्ञानको कौशल संग, आफ्नो गणित कौशल, सबै क्षेत्रहरूमा, पूर्णतया नशे की लत रास्ते मा चुनौती हुनेछ को लागी गुलाब संग एक राजकुमारी ड्रेसिंग। बढि »
हाम्रो जस्तै मरोन्सका लागि गणित
हाम्रो जस्तै मरोन्सका लागि गणित। हाम्रो जस्तै मरोन्सका लागि गणित
यो साइट सोच्न क्वेस्ट कार्यक्रम द्वारा सुरू गरिएको थियो, त्यसैले विद्यार्थीहरूले तपाई जस्तै बनाउनु भयो र यसलाई बनाउनुहुन्छ। यसको मतलब यो होइन कि वेबसाइटले कुनै पनि कम सुन्दर छ भने शिक्षकहरूको समूहले यसलाई सँगै राखेको छ। साइटले गणित मद्दतको धन प्रदान गर्दछ। पृष्ठको बायाँ तिर, तपाइँ "सिक्न" स्तम्भ फेला पार्नुहुनेछ। यस भागले अवधारणाहरूमा ब्रश गर्न मद्दत पुर्याउन सक्छ जुन तपाईले पहिलो पटक स्कूलमा वरिपरि प्राप्त गर्नुभएको छैन। पृष्ठको दाहिने पक्षमा, तपाईँले "अन्तरक्रिया" कलम फेला पार्नुहुनेछ, जुन तपाईले सन्देश बोर्डहरू प्रश्नहरू सोध्नुहुनेछ, सूत्रहरूको सूचीहरू, क्विजिजहरू र एक तारकीय गणित लिङ्कहरू। बढि »
यो वेबसाइट गणित शिक्षिकाद्वारा डिजाइन गरिएको थियो: गणित को शिक्षक परिषद। सोचमा मूर्ख नगर्नुहोस् कि यो एक भयानक सिक्न अनुभव हुनेछ, यद्यपि। यी शिक्षकहरूले के गर्दै थिए थाह थियो। अद्भुत, हुह? कहिलेकाहीँ शिक्षकहरू वास्तवमै बुझ्न कसरी मद्दत गर्छन् विद्यार्थीहरूलाई कसरी मदत गर्छन्। यो वेबसाइटमा, तपाईं चुनौतिको चुनौती वा गणित अवधारणाहरु द्वारा अध्ययन गर्न कि चयन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ के तपाईले गर्नुहुन्छ:
चुनौती वा गणित अवधारणा चयन गर्नुहोस्।
आफैलाई पेश गरेको समस्याको जवाफ दिन प्रयास गर्नुहोस्।
यदि तपाईं पक्का हुनुहुन्छ भने, "सुरूवात" मा जानुहोस् तपाईलाई संकेत सुरू गर्न वा सुचारु दिनको लागि "संकेत" क्लिक गर्नुहोस्।
आफ्नो काम जाँच गर्न "जवाफ" मा क्लिक गर्नुहोस्।
चुनौतीहरू रैखिक समीकरण र प्रकार्यबाट दायरा र ज्यामितिसँग सम्भावना र तथ्याङ्कमा दायरामा पर्दछ। बढि »
आर्चुअल अनुशासनको राष्ट्रिय पुस्तकालय
यो वेबसाइट एक किन्न नसकिने सिक्नको सपना सत्य हो। उच्च विद्यालयका विद्यार्थीहरूको लागि यो कठिन छ, अनुभव र सट्टा गणितीय अवधारणाहरू कहिलेकाहीँ उनीहरूको टाउकोमा पुग्न आवश्यक हुन्छ, विशेष गरी एक सेटिङमा जुन उनीहरूको शिक्षाको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन। के तपाइँ ती विद्यार्थीहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ? यी भर्चुअल हेरविचारले मद्दत गर्न सक्छ! तिनीहरू गणित अवधारणाहरु को व्याख्या मा हस्तान्तरण प्रदान गर्दछ। तपाईं अनलाईन abacus मा मोती घुसाउन सक्नुहुन्छ, रोचक पहेली को हल को आसपास घटक गरेर र ग्राफ्स, पैटर्न र mazes सिर्जना गर्न डाटा विश्लेषण र अन्वेषण गर्न। हेरफेरले तपाईंलाई गणितको समीकरणको अर्थ के हो भनेर ठीक देख्न अनुमति दिन्छ, जुन अचम्मको उपयोगी हुन्छ जब तपाईं फराकिलो हुन्छ। बढि »
गणित अनुसन्धान परियोजनाहरू
यदि यो तपाईंको जूनियर वा वरिष्ठ वर्ष हो र तपाई गणित आधारित अनुसन्धान परियोजनाको साथमा आउनुहुने रोमाञ्चक कार्य सौंपाएको छ, तर तपाईं कसरी सुरु गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा पूर्ण हानिमा हुनुहुन्छ, त्यसपछि माथि वेबसाइट मा झाँट लिनुहोस्। वेबसाइटमा, जुन वास्तवमा केवल विचारहरूको एक सूची हो, तपाईंले गणित आधारित विज्ञान मेला परियोजना वा वरिष्ठ परियोजनाको लागि उपयुक्त उच्च विद्यालय गणित परियोजना विचारहरूको खोजी पाउनुहुनेछ। यहाँ एक जोडी हो:
Mazes: के त्यहाँ 2-आयामी mazes बाहिर निकाल्न एल्गोरिदम छ? 3-आयामीको बारेमा? Mazes को इतिहास हेर्नुहोस्। तपाईं कसरी भूलभुलैयामा (2 वा3आयामी) गुमाएका व्यक्ति फेला पार्नु भएको छ र अनियमित ढंगले लुकाउन सक्नुहुन्छ? तपाईले उहाँलाई खोज्न कतिजना मानिसहरू चाहिन्छ?
क्लाइडोस्कोप: एक क्लाइडोस्कोप निर्माण गर्नुहोस्। यसको इतिहास र सममितिको गणितको अन्वेषण गर्नुहोस्।
आर्ट गैलरी समस्या: कला चित्रमा सबै चित्रहरू हेर्न आवश्यक कम्तीमा गार्डहरू के हो? गार्डहरू विशिष्ट स्थानमा राखिएका छन् र सामूहिक रूपमा पर्खालहरूमा हरेक बिन्दुको प्रत्यक्ष सीधा रेखा हुनु पर्दछ।
एक ट्री को बट को महत्व
हरेक अवसरको लागि बेबी उद्धरण
आधारभूत मूल मुद्रण योग्य आवधिक तत्व
गोल्फ क्लब दूरी: तपाइँले तपाइँको क्लबलाई कसरी हराउनु पर्छ?
1910 को Lakeview Gusher, बीपी तेल फैल भन्दा ठूलो, होइन
द्वितीय विश्वयुद्ध: एडमिरेर थॉमस सी किन्डिद
अग्निभाषा: 'आगो र वर्षा'
सिंगापुरको आर्थिक विकास
20 औं शताब्दीको संगीत समय
शीर्ष जोआन जेट गीतहरु को '80s
'द व्यापारीको वेनिस' अधिनियम 1, दृश्य3- सारांश
मेक्सिकन हिल्सको चुन्च
जॉन वेस्ले को जीवनी, मेथोडिस्ट चर्चको सह-संस्थापक
के ऊर्जा पेय समावेश गर्दछ बुल Sperm?
संज्ञाका प्रकारहरू: एक स्टार्टर किट
गैर मानक अंग्रेजी परिभाषा र उदाहरणहरू
Bobby Zimmerman देखि लोक प्रतीक Bob Dylan देखि परिवर्तन
10 चट्टानलाई कसले दिनुहुन्छ?
औपनिवेशिक अमेरिकी हाउस शैलियहरुको लागि मार्गदर्शक, 1600 देखि 1800 सम्म
पियानो शास्त्रीय संगीत
परमेश्वरले एक हर्षित जनावरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ -2कोरिन्थी 9: 7